Islam Virus: Twisted Command
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ ဧကန်မုချ ကျဆုံးရမည် ။
မိုဟာမက် ဟာ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီး ကောက်ကျစ်စွာ အမိန့် ပေးတတ်သူပါ။
အဲဒီမိုဟာမက်ရဲ့ အမိန့်တွေ ကို ပဲ မူဆလင်တွေ ဟာ တစ်သွေမတိမ်းလိုက်နာကြရပါတယ်။
မိုဟာမက် ဟာ မူဆလင်မဟုတ်သူ တွေ ကို လိမ်လည် လှည့်ဖျားပြီး ချေမှုန်း သိမ်းပိုက်ဖို့ အမြဲတမ်း twisted လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မိုဟာမက် ဟာ ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေကို သူ့ကို လက်ခံဖို့ စည်းရုံးတဲ့ အနေနဲ့
ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေ ရဲ့ မြင့်မြတ်ရာမြို့ ဂျေရုဆလင် မြို့ ကို ( အခု မက်ကာမြို့ ကို မူဆလင်တွေ ဦးတိုက်သလို) ဦးတိုက်ဖို့ အမိန့် ပေးခဲ့ပါတယ်
မူလ ပထမဆုံး က မိုဟာမက် ကိုယ်တိုင်နဲ့ မူဆလင်တွေ ဟာ ( သူတို့ အင်မတန်မုန်းတဲ့) ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ မြင့်မြတ်ရာမြို့ ဂျေရုဆလင် မြို့ ကို ( အခု မက်ကာမြို့ ကို မူဆလင်တွေ ဦးတိုက်သလို) ဦးတိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေကို မိုဟာမက်ကို လက်ခံဖို့ စည်းရုံးဖို့ အနေနဲ့ပါ။
ဒါပေမယ့် ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေက မိုဟာမက် လို အာရပ် ဓားပြ အကြီးစားကို သူတို့ ထာဝရဘုရား ထံက ပရောဖက်အနေနဲ့ လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
ကျနော်တို့ သာကီမျိုးကို တန်ဖိုးထားသလို၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာ သာကီမျိုးက ပွင့်ခဲ့သလိုမျိုး
ဂျူးလူမျိုးတွေ ဟာလည်း ထာဝရဘုရား ရဲ့ ပရောဖက်တွေ မွေးဖွားရာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ထာဝရဘုရား ထံက ပရောဖက် အားလုံး ဟာ ( မိုးဇက် က စလို့ ယေရှုခရစ် အထိ) ဂျူးလူမျိုးတွေ သာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေက မိုဟာမက် လို အာရပ် ဓားပြ အကြီးစားကို သူတို့ ထာဝရဘုရား ထံက ပရောဖက်အနေနဲ့ လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီအချိန်က စပြီး ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေကို စည်းရုံးလို့ မရမှန်းလည်း သိရော မိုဟာမက်ဟာ ခရစ်ယာန်တွေ၊ ဂျူးတွေကို သောက်ဂရုမစိုက်တော့ ပဲ
မိုဟာမက်ရဲ့ ဇာတိ ဖြစ်တဲ့ ၊ အင်အားများပြားရာ အာရပ် လူမျိုးတွေကို စည်းရုံးဖို့ အာရပ်လူမျိုးတွေ ရဲ့ ရိုးရာ ( မိုဟာမက် မမွေးခင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နှစ်ထောင် က တည်း က ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ) ကုဗတုံးအနက်ကြီး က လခြမ်းနတ်ဘုရားအလ္လာဟ် VG ကျောက်တုံးလေးကို သာဦးတိုက်ခိုင်းပါတယ်။
အလ္လာဟ်ဆိုတဲ့ ( ဘုရားတစ်ခုခု အနေနဲ့ ထားပါ ) အရာ က အခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုးပြောတတ်သလား။
အခု အလ္လာဟ် က ဂျရုဆလင် မြို့ ကို မူဆလင်တွေကို ဦးတိုက်ခိုင်းလိုက်၊
ခဏနေ အလ္လာဟ်က မဟုတ်တော့ ပြန်ဘူး။ မက်ကာမြို့ ကို ဦးတိုက်ခိုင်းလိုက်၊ လုပ်ခိုင်းမလား။
တော်ကြာနေ အလ္လာဟ် က မူဆလင်တွေကို ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဦးတိုက်ခိုင်းရင်ကော မူဆလင်တွေ က ဦးတိုက်မှာ လား။
အဓိက အကျဆုံး အချက် က မူဆလင်တွေ ဦးတိုက်နေတဲ့ အာရပ်လူမျိုးတွေ ရဲ့ ရိုးရာ ( မိုဟာမက် မမွေးခင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နှစ်ထောင် က တည်း က ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ) မက်ကာမြို့ က ကုဗတုံးအနက်ကြီး က လခြမ်းနတ်ဘုရားအလ္လာဟ် VG ကျောက်တုံးလေး ဟာ မိုဟာမက် မမွေးခင် က လည်းရှိခဲ့တာ ပဲ။
မိုဟာမက် မွေးတဲ့ အချိန်၊ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ လည်း မက်ကာမြို့ က ကုဗတုံးအနက်ကြီး က လခြမ်းနတ်ဘုရားအလ္လာဟ် VG ကျောက်တုံးလေး ဟာ ရှိနေတာပဲ၊ ဘာလို့ ဦးမတိုက်လဲ
ဘာဖြစ်လို့ ဦးမတိုက် ပဲ ဂျေရုဆလင်မြို့ ကို ဦးတိုက်ခိုင်းသလဲ။
တကယ်တမ်း သာ မက်ကာမြို့ က ကုဗတုံးအနက်ကြီး က လခြမ်းနတ်ဘုရားအလ္လာဟ် VG ကျောက်တုံးလေး ဟာစကြာဝဠာ မှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုရင် ပထမဦးစွာ မိုဟာမက်နဲ့ မူဆလင်တွေဟာ မက်ကာမြို့ က ကုဗတုံးအနက်ကြီး ကို ကျော်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ ဂျေရုဆလင်မြို့ ကို ဦးတိုက်ခိုင်းသလဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီကျောက်တုံး က ဂျေရုဆလင်မြို့ ကို ရောက်နေလို့လား။ :)
ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီကျောက်တုံးအနက်ရှိရာ မက်ကာမြို့ ( ခု မူဆလင်တွေ ဦးတိုက်နေတဲ့ ) ကို ကျော်ပြီး မိုဟာမက် က မူဆလင်တွေ ကို ဘာဖြစ်လို့ ဂျေရုဆလင်မြို့ ကို ဦးတိုက်ခိုင်းသလဲ။
တကယ် တမ်း သာ လခြမ်းနတ်ဘုရားအလ္လာဟ် VG ကျောက်တုံးလေး ဟာစကြာဝဠာ မှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုရင် အစကတည်း က မိုဟာမက်ရဲ့ အာရပ်ရိုးရာ ကျောက်တုံးကို ပဲ ရှိခိုးခိုင်းမှာ ပေါ့။
ယုတ်တိ ရှိသလား။ ဥပမာ ထပ်ပြောမယ်၊
ယေရှုခရစ် က ငါ့ကို ယုံကြည်တဲ့သူ မှန်သမျှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မယ်ပြောတယ်။
တော်ကြာ ခဏနေတော့ မဟုတ်တော့ ပြန်ဘူး။
ငါ့ကို ယုံကြည်တဲ့သူ မှန်သမျှ ကယ်တင်ခြင်း မရောက် ဘူးလို့ ပြောမယ် ။ ကဲ ခရစ်ယာန်တွေ က ယုံမလား။
အဲဒီလိုပဲ အလ္လာဟ် က မူဆလင်တွေ ကို အမြင့်မြတ်ဆုံး ဂျေရုဆလင်မြို့ ကို ဦးတိုက်လို့ ပြောတယ်
စကြာဝဠာ မှာ အမြင့်မြတ်ဆုံး က မိုဟာမက်ရဲ့ အာရပ်ရိုးရာ လခြမ်းနတ်ဘုရားအလ္လာဟ် VG ကျောက်တုံးလေး ဖြစ်သွားပြန်ရော၊
အလ္လာဟ်နဲ့ သမီးတော် နတ်ဘုရားမ သုံးပါး ကို မူဆလင်တွေကို ကိုးကွယ်ခိုင်းလိုက် ( အာရပ်ရိုးရာ မက်ကာမြို့ က လခြမ်းနတ်ဘုရား အလ္လာဟ် တွင် သမီးတော် နတ်ဘုရားမ သုံးပါး ရှိပါသည် )
အဲဒီလို မိုဟာမက် က အလ္လာဟ်နဲ့ သမီးတော် နတ်ဘုရားမ သုံးပါး ရုပ်ထုတွေ ကို ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရှိခိုးနေတာကို မူဆလင်တွေ က မေးခွန်းထုတ်တော့
မိုဟာမက် ကို စေတန် ( နတ်ဆိုးက ) ပူးကပ်ပြီး အဲဒီ လို ခိုင်းလို့ တဲ့၊
ဒါဆို ကုရ်အာန်တစ် အုပ်လုံး က ရော မိုဟာမက် ကို စေတန် ( နတ်ဆိုးက ) ပူးကပ်ပြီး ရေးခိုင်းတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ဘယ် ကုရ်အာန်စာပိုဒ်ကတော့ဖြင့် မိုဟာမက် ကို စေတန် ( နတ်ဆိုးက ) ပူးကပ်ပြီး ရေးခိုင်းတာ..
ဘယ် ကုရ်အာန်စာပိုဒ်ကတော့ဖြင့် အလ္လာဟ် က အမှန် အကန် ချပေးတာ ပါ ၊ ဘယ်လို ခွဲမလဲ။ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ Twisted
နတ်ဆိုးဝင်ပူးပြီး ခိုင်းတာကို ခံရပါတဲ့ဆို တဲ့ မိုဟာမက် ဟာ ဘယ်လို လုပ် စင်ကြယ် ( ယုံကြည်စိတ်ချ နိုင်ပါတော့မလား ) ပါတော့ မလဲ။
ကဲ ဘယ်လို လဲ၊ အလ္လာဟ် က စကားကို ဗလောင်း ဗလဲ ပြောသလား။
ကဲကွာ၊ ဒါဆို အလ္လာဟ် က ခဏ နေတော့ မဟုတ်တော့ပြန်ဘူး။
မိုဟာမက် က ငါလွှတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အင်ကြီး ၊
ကုရ်အာန်ကျမ်းက လည်း မှားနေတယ်။ အပျိုစင် ၇၂ယောက်တော့ မရဘူး။ မင်းတို့ _ ပဲရမယ်။
အခု မင်းတို့ မူဆလင်တွေ ကိုယ့်ဘော ကို သာ ကိုးကွယ်ကြတော့ လို့ မူဆလင်တွေကို အလ္လာဟ် က ထပ်ပြောရင်ကော ဘယ်လိုလဲ။
အဖြစ်မှန် က မိုဟာမက် ဟာ ဂျူးလူမျိုးနဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို စည်းရုံးဖို့ ဂျေရုဆလင်မြို့ ကို ( အခု မူဆလင်တွေ ဦးတိုက်နေသလို ) တစ်နေ့ ၅ခါရှိခိုးခိုင်းတာ ပါ။
အရမ်းကို ကောက်ကျစ် ပြီး twisted ဖြစ်တဲ့ စကားတွေပါပဲ။
အဲဒီမိုဟာမက် ကို နမူနာယူပြီး မူဆလင်တွေ ဟာ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့တွေကို ( ကြိုက်သလို လိမ်လည်ခွင့်ရှိပါတယ် )
အရမ်းကို twisted ဖြစ်တဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်း ဖြစ်ပါတယ်
လိမ်လည်မပြောရ ( မူဆလင် အချင်းချင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့တွေကို ကြိုက်သလို လိမ်လည်ခွင့်ရှိပါတယ် )
ကိုယ့်အချင်းချင်း ချစ်ကြလော့ ( မူဆလင် အချင်းချင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့တွေ မပါဘူး။ )
ကိုယ့်မူဆလင်အချင်းချင်း မသတ်ရ ( မူဆလင် အချင်းချင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာ မူဆလင်မဟုတ်တဲ့ ဘာသာခြား၊ ဘာသာမဲ့တွေ မပါဘူး။ )
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလာမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ ဧကန်မုချ ကျဆုံးရမည် ။
ISLAM VIRUS PDF
ISLAM VIRUS PDF ရပြီ။
စာမျက်နှာပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ပါသည်။ Click နှိပ်ပါ
PDF ပြုလုပ်ပေးသော " phonegyi " ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ISLAM VIRUS PDF ကို အားလုံးထံရောက်အောင် Share ပေးကြပါခင်ဗျား။
အားလုံးထံရောက်အောင် Share ပေးကြပါခင်ဗျား။
Islam Virus in Scribd
Read IslamVirus in Scribd
Please share it via Facebook, Twitter, Blogs, etc. Thanks
Allah/Islam is the 666/Beast of Biblical Revelation. New Testament is written in Greek and Greek Digit 666 is exactly the same as Arabic Word ' Allah'. Prophecy has been fulfilled about Satan(Allah) & his Islamic Empire. Watch part-3
Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number ofaman; and his number is 666/Allah.
666/Allah/Beast/Islam which deceived 1.8 Billion people (1/4 of the World Population)
Why Demographic Jihad is Deadly Dangerous?
"Fight them ( Non-Muslims) until Islam reigns supreme" (Sura 2:193). Army of 666/Allah is conquering the whole world.
Future Visions of Arakan & Myanmar
ဗလီတွေ မှာ ဘာတွေ ဟောပြောနေလဲ ။
Rewards in Allah's Paradise for Muslim Martyrs(Terrorists) those who could have successfully killed Non-Muslim people
Australia Islam Monitor
The World Without Islam
Muslims' Hatred Watch
Islamic Muslims' Hatred TV
Understanding Muhammad ( E-book Download )
Winds of Jhad
The 3rd Jihad
What the West needs to know ?
Obsession; Radical Islamic Jihad against the West
Jihad in Arakan
Islamization in India
Wai Hnin Pwint Thon ( Satire )
Myanmar Online Warriors ( BHG )
Persecution of Non-Muslims in Bangladesh
About illegal Muslim Immigrants from Bangladesh
MyanmarTruthers ( ပို့စ်အသစ်များမတင်တော့သော်လည်း များစွာသော ပို့စ် အဟောင်းများမှာ အင်မတန်ဖတ်သင့်ပါတယ် ) မောင်ဆန် နဲ့ ကိုဇော်မျိုးတို့ ရောက်ရာနေရာမှ အမြန်ပြန်လာပါ။ ဖေ့စ်ဘုတ် နဲ့ ဘလော့်ခ်မှာ မောင်ဆန် နဲ့ ကိုဇော်မျိုးတို့ကို အထူးလိုအပ်နေပါသည်။
Do you know these facts ?
The Last Stronghold of Buddhism
Total Annihilation of others' religions
Why do they hate others religions ?
Sex with9years old child
Where their faith belong to ?
Defending The Last Stronghold of Theravada Buddhis...
Cardinal Sin of Women in Islam
Mohammed's twisted desire
islamvirus2.blogspot.com to 3,4,5,6,7,8 and islamvirus9.blogspot.com